Tsvaga Winter Tour Odisha | Nokuda Kwokuwedzera Dana ku + 91-993.702.7574
Tsvaga Odisha Winter Tour
Kutsvaga mazano ekufambisa iyi yechando, asi unoda kushanya kune imwe nzvimbo inofadza? Sandwende Pevhu 'Winter Tour Odisha Package ndiyo yose yaunoda. Yakagadzwa seKashmir yeOdisha, Daringbadi sango rakasviba uye mvura zhinji ine mvura inokurudzira vanoda vanhu. Yakazara nemapako, mitsuwa nemakomo Satkosia Tiger akachengetwa ndiyo nzvimbo yakanakisisa kune vanodikanwa venyama. Kunaka kwakanaka pamwe chete nemararamiro, mhuka dzomusango uye chapupu chisingaoneki che shiri dzengozi ndechimwe chinhu chisingadikanwi nomunhu. Located in Kendrapara, Bhitarkanika inzvimbo yepanyama yemhuka dzomusango dzinosanganisira mbambo. Kune vanofarira shiri, Mangalajodi ndiyo yakanakisisa nzvimbo yakanakisisa. Nguva yechando ndiyo nguva yakanakisisa yekuona shiri dzinoputika pamwe nekutyaira. Kuzivikanwa kweOlive Ridley Turtles, gungwa reGahirmatha ndiro nzvimbo yakanakisisa yekuona chimiro. Chilika Lake imba yemakumi ezviuru zvekufamba kune dzimwe nyika uye shiri dzomunharaunda uye dolphins paSatapada iyo ndiyo imwe nguva yakanakisisa yekuwana muchando. Zuva ndiyo nguva yegore, iyo vazhinji vevaifamba vakabuda parwendo. Winters muOnisha inoshamisa. Iwe haufaniri kupotsa mukana uyu neSand Pebbles 'Winter Tour Odisha, iyo ichakupa nguva yakanakisisa yaunoda nguva dzose. Kubwinya kwechokwadi kwehurumende kunopenya mumwaka wekunaka kwemamiriro ekunze. Nzira dzakashata dzeHodisha dzinosangana pamwe nekugadzira kareidoscope isingakanganwiki semhemberero uye zvikomborero zvakarongwa munzvimbo dzakasiyana-siyana Winter Tour Odisha dzinokupa iwe unhu hwakanakisisa yeOudisha Tour Packages. Winters inounza nemweya unonzwa-wakanaka, uye inguva ipi yakanaka yaunogona kuwana iyo Odisha Winter Special Package kubva kuOudisha Tour Operators yedu? Pasinei nokuti uri kufamba uri woga kana neshamwari, Sand Pebbles 'Winter Tour Odisha inoedza zvakanakisisa kukupa Winter Tour yakakwana.
Kune vanodikanwa vemazvisikwa, Similipal, National Park ne Tiger Reservoir, imba yemhando dzakawanda dzisina kuwanikwa dzemiti nemhuka. Kunze kwezvo, ine 231 marudzi e shiri. Iyi National Park inopararira pamusoro pe2750 sq. Km. uye ine nhamba dzakawanda dzemvura umo vatashanyi vangada kushandisa imwe nguva yakanyarara uye yakasununguka. Munharaunda yeKeonjhar, dombo rekudanwa rinonzi Ravana Chhaya rinofanirwa kuona. MuSitabinji magonhi emadziro akanaka. Mvura, Sanaghagara, Badaghagra uye Khandadhar vane hupfumi hwekushanyirwa kwezvikepe zveKeonjhar.
Pasinei nokuti iwe uri munhu anoda chido kana kuti uri munhu anoda kungova nezororo rezororo, Gungwa reMatombo 'Kutarisa uye Kufamba inogona kuva yako yakanakisisa yekufambidzana naye. Saka usamira pamberi pechando ichi ichipfuura uye bvisa Odisha Winter Special Packages ikozvino.
Posted In: famba
Inzwa Ikunakidza Kunaka KweMimhanzi uye Dhemberero dzemitambo muOrissa